ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း(သချာင်္) – ကွန်​ပျူတာအတွက်​ အင်္ဂလိပ်​စာ – ၄ | MoeMaKa Burmese News & Media
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သချာင်္) – THE RIGHT WORD 3
အလင်းလက် - မုသားကိုယ်ရံတော်နှင့် ကာကွယ်ခြင်း (မိုးမခ) ဇွန် ၁၂၊ ၂၀၁၈
English for Computers (4)
A printed circuit is simplyanetwork of copper strips attached toaboard. It is made by first planningacircuit onaclean copper plate through carbon paper. The carbon plate is glued to an insulating sheath.The carbon lines on the copper are then printed over withasubstance that resists being etched by an acid. The board is then put intoabath of acid or etching solution in which all the copper except for the printed is etched away.The printed circuit is removed and cleaned. Holes are drilled at various points along the copper lines. The electronic devices or components are placed on the non-copper side of the board.The wires from each component are fed through the holes soldered to the copper.Current can now flow along the lines to each component.
ပုံနှိပ်​ထား​သောဆားကစ်​ဟူသည်​မှာ ကားချပ်​တစ်​ခု​ပေါ်တွင် ကပ်​ထား​သော ​ကြေးနီဖြင့်​လုပ်​ထား​သော အ​မြှောင်းများပါဝင်​သည့်​ကွမ်​ဟက်​ဖြစ်​သည်​။ ၄င်းကိုပြုလုပ်​ရန်​အတွက်​ ​ရှေးဦးစွာ သန့်​စင်​ထား​သော​ကြေး​နီပြား​ပေါ်တွင်​ ကာဘွန်​စက္ကူမှတစ်​ဆင့်​ ဆားကစ်​ပုံတစ်​ခုကို စမ်းဆွဲကြည့်​သည်​။ ​ကြေးနီပြားကို လျှပ်​စစ်​ နှင့်​အပူတို့ကို တားဆီး​သောအစွပ်​အကာတစ်​ခုအ​ပေါ်တွင်​ ​ကော်​ဖြင့်​ ကပ်​ထားသည်။ ​ကြေးနီပြား​ပေါ်ရှိ ကာဘွန်​မျဉ်းများကို အက်​စစ်​ဖြင့်​အ​ရေးအ​ကြောင်းများဖြစ်​ခြင်းကို ကာကွယ်​​သောပစ္စည်းတစ်​ခုကို သုံး၍ ပုံနှိပ်​​ပေးသည်​။ ထိုကားချပ်​ကို အ​ရေးအ​ကြောင်း​ဆေး​ရေ ဟု​ခေါ်​သော အက်​စစ်​​ရေထဲတွင် ​စိမ်​လိုက်​သည်​။ ထိုအခါတွင် ​ပုံနှိပ်​ထား​သော​ကြေးနီမှအပ အခြားအပိုင်းများကို စားပစ်​လိုက်​သည်​။ ပုံနှိပ်​ထား​သောဆားကစ်​ကို ယူ၍ သန့်​စင်​လိုက်​သည်​။ ​ကြေးနီမျဉ်းများ တစ်​​လျှောက်​တွင်​အ​ပေါက်​များထွင်းသည်​။ အီလက်​ထ​ရောနစ်​ကရိယာများနှင့်​ အပိုင်းများကို ​ကြေးနီမဟုတ်​​သောဘက်​တွင်​ထားသည်​။ အပိုင်းတစ်​ခုစီမှ ဝါယာကြိုးကို ​ကြေးနီအ​ပေါက်​များတွင်​ ဂ​ဟေ​ဆော်​လိုက်​သည်​။ ထိုအခါတွင်​ လျှပ်​စစ်​ဓာတ်​သည် ​မျဉ်း​ကြောင်းများမှတစ်​ဆင့်​ အပိုင်းတစ်​ပိုင်းစီသို့ စီးဆင်​သွားနိုင်​သည်​။
Print (v, N) – ပုံနှိပ်​သည်​။ ပုံနှိပ်​ခြင်း။
Printed (adj) – ပုံနှိပ်​ထား​သော
Attach (v) တွယ်​ထားသည်​။ ကပ်​ထားသည်​။ တွဲထားသည်​။
Plan (v, N) – စီစဉ်​သည်​။ အစီအစဉ်​။
Through prep – ဖြတ်​သွား၍
Glue (v, N) – ​ကော်​။ ​ကော်​ဖြင့်​ကပ်​သည်​။
Insulate (v) – တားဆီးသည်​။ လျှပ်​စစ်​အပူ
Insulating (adj) – တားဆီး​သော
Sheath (N) အစွပ်​။အကာ
Substance (N) – အရာဝ​တ္ထု
Resist (v) – တွန်းကန်​သည်​
Etch (v, N) – အ​ရေးအ​ကြောင်းထင်​​စေသည်​။
Bath (N) အ​ရေ
Remove (v) – ဖယ်​သည်​
Drill (v) – အ​ပေါက်​​ဖောက်​သည်​
Various (adj) – အမျိုးမျိုး
Non- ××× မဟုတ်​​သော
Non-copper – ​ကြေးနီမဟုတ်​​သော
Feed (v) – အစာ​ကျွေးသည်​။ ဖြစ်​​စေသည်​။
Flow (v) – စီးသည်​။
Component (N) – အပိုင်း